Ngabe ufuna ukwazi ukuthi isiphepho sakha kanjani? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Siyini isiphepho futhi sakhiwa kanjani?
UMonica sanchez | | Iziphepho, Izimo zezulu
ISiphepho uCatarina, Mashi 26, 2004
Esinye sezimo zesimo sezulu esikhanga kakhulu ngenxa yamandla abangawathola futhi, ngenxa yalokho, umonakalo ongawudala, ngokungangabazeki umlingisi wethu omkhulu namuhla.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi siyini isiphepho futhi sakhiwa kanjani? Ngizokuchazela ngezansi.
Isiphepho isiqu esikhulu somoya esihambisana nesiphepho, ezingakhiwa kunoma iyiphi indawo lapho kunezingcindezi eziphansi, ngoba lezi yizindawo eziheha umoya ovela emkhathini.
Izinhlobo eziyisihlanu zeziphepho zihlukanisiwe (tropical, extratropical, subtropical, polar and mesocyclones), esizogqamisa ngazo iziphepho ezishisayo nezindawo ezibandayo zokuba yizinkanyezi zezindaba ezivame kakhulu.
-Isiphepho seTropical: yakha izilwandle ezinamazinga okushisa aphezulu, afudumele. Okwe- bamunce wonke amandla abawadingayo ukuthuthukisa. Zaziwa nangokuthi iziphepho noma izivunguvungu, futhi nanjengezivunguvungu ezishisayo.
Imimoya abayikhiqizayo ingafinyelela esivinini okungenani 120km ngehora, ephelezelwa yimvula enamandla.
-Isiphepho sePolar: Ngokungafani ne-tropical, lolu hlobo lwesiphepho lunesikhathi esifushane. Zikhula ngokushesha okukhulu, kangangoba ukufinyelela amandla abo esiphezulu ngosuku olulodwa nje.
Abathathwa njengenkinga njengeziphepho, kepha amandla emimoya nawo aphezulu.
Isiphepho, omunye wemiphumela yokuqhuma kwe-cyclogenesis
Uma sikhuluma ngezivunguvungu akunakugwenywa ukuthi sibhekane nodaba lwe i-cyclogenesis eqhumayo. Lesi simo asilutho olunye ngaphandle kokuhlanganiswa kwesiphepho, esikhiqiza umoya ovunguzayo kanye nesiphepho okungadala umonakalo omkhulu wezinto ezibonakalayo.
Ukuze kwenzeke, izinga lokushisa kobuso basolwandle nolo lomoya kumele lehluke kakhulu, ukuze kube khona ukwehla kwengcindezi okuphawulekayo nangesikhathi esifushane kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » Siyini isiphepho futhi sakhiwa kanjani?
Lokhu kulula, qhubeka uhambe kanjena, ungaba namandla futhi ube nzima ukwedlula lokhu, ngicela, ngiyingane yegundane le-skywars
Inkungu yakha kanjani